Gabagabada koobka Afrika - BBC Somali - Cayaaraha
Gabagabada koobka Afrika
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Febraayo, 2013, 13:15 GMT 16:15 SGA
Cayaarta Final-ka ee tartanka koobka Qaramada Africa ee ka socday dalka Koonfur Africa dhowrkii todobaad ee ugu dambeeyay, ayaa waxaa maanta ku kulmaya dalalka Nigeria iyo Burkina Faso.
Ciyaartooyda Nigeria oo dabaaldagaya.
Nigeria waxaa tababare Steven Keshi uu sheegay in maanta ay kala cadaan doonto in laacibiinta Victor Moses iyo Emannuel Emenike ay u safan doonaan kooxda Nigeria, maadaama ay horay u dhaawacmeen.
Wuxuu kaloo rajaynayaa in uu noqdo qofkii ugu horeeyay ee u dhashay Nigeria oo laba jeer gacantiisa ku qaada koobka. Markii koowaad waxay ahayd sanadkii 1994 oo uu kabtan u ahaa kooxdii Nigeria ee qaaday koobka Africa. Wuxuuna sanadkan filayaa isagoo macalin u ah Nigeria in uu qaado.
Nigeria kama mid ahayn sanadkan kooxaha la is lahaa final-ka way iman doonaan.da Nigeria, oo semifinalkiina 4-1 ku garaacday kooxda dalka Mali.
Kooxda Burkina Faso-na waxay seminal-kii kaga soo adkaaday kooxda dalka Ghana oo dhamaadkii cayaarta iyo sodon daqiiqo oo lagu daray ku dhamaatay 1-1 balse rigoorayaal ay ku adkaatay Burkina Faso 3-2.
Waxay ahayd cayaar qisooyin badan leh, waayo Burkina Faso goolna waa laga diiday rigoore cad oo ay heleenna iyagaaba la ganaaxay oo digniin labaad oo la siiyay cayaaryahanka Pitroipa looga saaray cayaarta markii garsooruhu u arkay in uu ula kac dhulka isugu tuuray.
Burkina Faso, oo dacwootay kadib ayaa cayaaryahanka Pitroipa laga saamaxay ganaaxa, oo wuu u safan doonaa kooxdiisa cayaarta final-ka, balse Burkina Faso waxaa ka maqan Alan Traore oo ka mid ah cayaaryahanada ugu goolal dhaliska badnaa tartanka, wuxuu dhaliyay afar gool.
Waxay filaysaa Burkina Faso in cayaaryahankan oo dhaawac ku maqan booskiisa ay buuxin karaan Cayaaryahanada Bance iyo Pitroipa.
Tababaraha kooxda Burkina Faso Paul Put, oo dalka Belgium u dhashay, wuxuu rumaysan yahay in markii ugu horaysay ay Burkina Faso ku guulaysan karto koobka, isagoo filaya in ay dib u soo noqoto sumcadiisa dalka Belgium kadib markii loo qabsaday in uu ku lug lahaa musuqmaasuq go’aan looga gaaray cayaaro dhexmarayay kooxdiisa iyo kooxo kale.
Si kastaba, waxaa la filayaa in labada kooxba ay si xoog badan ugu soo diyaargaroobaan cayaarta finalka, oo dad badan rumaysan yihiin Nigeria ayaa ku guulaysanaysa markii sadexaad, balse dad kale ayaa aaminsan in markan ay tahay kooxda Burkina Faso tan ku guulaysan doonta marka aad eegto kooxaha ay ka soo adkaadeen iyo cayaaraha ay soo bandhigeen.
Dhinaca kale, kooxda dalka Mali ayaa noqotay kooxda gashay kaalinta sadexaad kadib markii ay 3-1 kaga badisay kooxda dalka Ghana.
Mamadou Samasa, Seydou Keita iyo Sigamary Diarra, ayaa sadexda gool u kala dhaliyay Mali, halka Ghana uu goolka kaliya u ansixiyay cayaaryahanka qadka dhexe Kwadwo Asamoah, markii laad meel dheer uu ka soo ganay uu damariyay goolhayaha Mali Soumbeyla Diakite.